LA XALIYAY: AWOODDA DARAWALKA EE GOBOLKA OO KU GUULDAREYSTAY WINDOWS 10 21H2 CUSBOONAYSIINTA - JILICSAN
La xaliyay: Awoodda darawalka ee gobolka oo ku guuldareystay Windows 10 21H2 cusboonaysiinta
Helitaanka shaashad buluug ah oo leh fariinta qaladka Guuldarada Gobolka Korontada Darawalka ka dib windows 10 21H2 update? Windows 10 Dareewalka Awood-xumada Gobolka Hubinta 0x0000009F badiyaa waxay dhacdaa kumbiyuutarka ama darawalka aaladda oo galaya qaabka hurdada inta aad wali isticmaalayso aaladda. Daaqadaha waxay u diri doontaa signalka toosinta aaladda marka loo baahdo iyo haddii qalabku ka jawaabi waayo wakhtiga ama gabi ahaanba, Windows waxay calaamadisaa qaladka Guuldarada Gobolka ee Awoodda Darawalka. Cilada waxaa inta badan sababa darawalka laftiisa ama goobaha korontada.
Haddii aad sidoo kale la halgamayso kan windows 10 BSOD, halkan 4 xal oo wax ku ool ah si loo hagaajiyo awoodda darawalka gobolka ee Windows 10.
Guuldarada Gobolka Korontada Darawalka Windows 10
Haddii dhibaatadu bilaabatay ka dib markii aad xidhid qalab cusub, isku day in aad ka saarto PC, ka dibna hubi in dhibaatadu sii socoto. Haddii dhibaatada la xalliyo, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad cusboonaysiiso darawalka qalabkaas. Haddii ay dhacdo in aad haysato wax ka badan hal, iska hubi inaad mid mid u hubiso.
Haddii ay taasi sabab u tahay Korontada darawalka ee cilladda gobolka , Windows 10 marar badan dib ayuu u bilaabmaa ama ku guuldareystaa inuu si caadi ah u bilaabo waxaan kugula talineynaa Boot windows galay hab nabdoon, kaas oo ku bilowda nidaamka leh shuruudaha nidaamka ugu yar oo u oggolaanaya in la sameeyo tillaabooyinka cilad-saarka hoose.
Demi kaydinta tamarta
U gudub Control Panel, Hardware iyo Sound ka dibna dooro Power Options.
Dooro 'Beddel dejinta qorshaha tamarta ee ku xigta qorshaha tamarta firfircoon.
Dooro isku xirka qoraalka 'Beddel goobaha awooda horumarsan'
Soo hel Settings Graphics ama PCI Express iyo Isku xidhka Maaraynta Awooda Gobolka oo deji waxqabadka ugu sarreeya, iyadoo ku xidhan kombuyuutarka aad haysato.
Soo hel Settings Adapter-ka Wireless-ka oo u deji waxqabadka ugu sarreeya.
Dib u kici kombayutarka oo hubi in aanay jirin awood darawalnimo oo dheeraad ah BSOD.
Cusbooneysii darawalada adabtarada bandhiga oo hubi
Riix furaha Windows + X ee shaashadda desktop oo dooro Maareeyaha Aaladda.
Balaadhi adabtarada bandhiga, midig-guji adabtarada bandhiga ee liiska ku qoran, guji update software darawalka.
dooro ikhtiyaarka si toos ah u raadi software darawalka oo raac tilmaamaha shaashadda.
Dib u bilaw kombayutarka oo hubi in dhibka la xaliyay.
Ama booqo shabakada qalabka wax soo saarta, soo dejiso software-ka darawalka ee ugu dambeeyay oo ku rakib PC-gaaga. Dib u soo kab daaqadaha oo hubi in aanu mar dambe khalad BSOD dhicin.
Dami bilawga degdega ah ee windows 10
Fur guddiga kantaroolka, ka dibna raadi oo dooro ikhtiyaarrada awoodda
Guji Dooro waxay qabtaan badhamada korontadu.
Guji Beddel goobaha aan hadda la heli karin.
Hubinta ka saar Daar degdega ah (lagu taliyay)
Guji Keydi isbedelada
Hubi tani waxay kaa caawin kartaa inaad hagaajiso wareegga cilladda gobolka ee awoodda darawalka.
Ku socodsii DISM iyo Utility SFC
Mararka qaarkood, gaar ahaan ka dib Windows 10 21H2 Cusbooneysii haddii qaybaha nidaamka ay xumaadaan ama ay maqan yihiin kombuyuutarkaaga waxaa laga yaabaa inay ku shaqeeyaan habdhaqan aan caadi ahayn iyada oo loo marayo khaladaadka BSOD ee kala duwan ee bilowga. Si loo hubiyo in faylashaadu ay ku jiraan xaalad caafimaad qabta, waa lama huraan in la dayactiro ama la soo celiyo maadaama ay qayb ka yihiin Windows.
Waxa jira DISM utility-ku-dhisan iyo Hubiyaha faylka nidaamka qalab ka caawiya isticmaalayaasha inay sameeyaan iskaanka, hagaajinta, iyo soo celinta faylalka maqan ama xumaaday ee kombiyuutarka.
Fur degdegga amarka maamule ahaan,
Nooca DEC amarrada hoose oo taabo furaha geli si aad isla sidaas oo kale ufuliso.
DEC /Online /Sawirka Nadiifinta / Soo CelintaCaafimaadka
Kadib 100% dhammaystir habka iskaanka Run amarka sfc / scannow oo gal.
Dib u bilaw Windows ka dib 100% dhammaystirka habka iskaanka
Hubi Ma jiro mar dambe awoodda darawalka ee cilladda BSOD loop.
Ku soo celi nidaamka xaaladii hore
Haddii mid ka mid ah xalalka kor ku xusan aysan kuu shaqeyn, waa waqtigii aad isticmaali lahayd nidaamka soo celinta muuqaal. Nidaamkaas oo dib ugu noqda xaalad shaqayneed hore oo aan saamayn lahayn faylal iyo faylal.
Riix Windows Key + R oo ku qor sysdm. cpl ka dibna ku dhufo geli.
Dooro tabka Ilaalinta Nidaamka oo dooro Soo Celinta Nidaamka.
Guji Next oo dooro barta Soo celinta Nidaamka la rabo.
Raac tilmaamaha shaashadda si aad u dhammaystirto soo celinta nidaamka.
Xalalkani miyay gacan ka geysteen hagaajinta awoodda darawalka ee cilladda gobolka windows 10? Nagu ogeysii faallooyinka hoose, sidoo kale akhri:
Windows 10 Laabtoobku wuu qaboojiyaa iyo arrimaha shilalka (la xaliyay)
La xaliyay: Windows 10 Adeegga Nidaamka Marka laga reebo Cilad BSOD
Shaqooyinka daabacadu waxay ku jiraan safka kadib marka la daabaco windows 10 (nadiifi safka daabacaada)
Xidhiidhka desktop-ka fog ma shaqaynayo windows 10
La xaliyay: Daaqadaha kuma xidhi karo daabacaha, gelitaanka waa la diiday
La xaliyay: Codsiga wuxuu awoodi waayay inuu si sax ah u bilaabo Windows 10